Home News Burundi oo mar kale diiday in Ciidankeeda lagasoo saaro Soomaaliya
Burundi oo mar kale diiday in Ciidankeeda lagasoo saaro Soomaaliya
Xilli uu qorshuhu ahaa in 1,000 ka tirsan Ciiddanka Burundi ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM bishan Feberaayo 28-da dib ugu laabtaan dalkooda ayaa waxay Dowladda Burundi mar kale gaashaanka ku dhufatay qorshahaasi.
Sida laga soo xigtay Danjiraha Burundi u jooga dalka Ethiopia, Ambassador Diyudonne Nadabarushimana waxa uu tilmaamay inay ka soo horjeedaan Daad-gureynta Ciiddankooda qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM.
Dalka Burundi waxa bishan 14-dii loo doortay xubin ka tirsan Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Ururka Midowga Afrika (The African Union Peace and Security Council), xilli uu Shirkii 32-aad ee Madaxda dalalka Afrika ku yeesheen Xarunta Dhexe ee AU-da ee magaalladda Addis Abeba.
Dalka Burundi waxaa la rajeynayaa inay xubin ka sii ahaadaan Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee AU-da saddexdii sanno ee soo socota.
Tallaabadaasi ayaa waxaa la ruemysan yahay inay siinayso sabab macquul ah oo ay 1,000 Askari kala soo bixi doonto ciiddankooda qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM.
Dowladda Burundi waxay ilaa bilowgii bishan u ololeynaysay in Isbedel lagu sameeyo qorshaha daad-gureynta 1,000 ka tirsan Ciiddankooda jooga Somalia, waxayna Wasiirkooda Arrimaha Dibedda, Esejeyl Nigibigira u direen dalka Masar si uu ula kulmo Madaxweynaha dalkaasi, C/Fataax Al-siisii, ka hor inta uusan Xilka Guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika kala wareegin Madaxweynaha dalka Ruwanda, Bawl Kigambe.
Dowladda Burundi waxay Kiiskaasi awgiisa mar kale codsadeen in Ciiddanka AMISOM ee laga soo saari doono Somalia tiro isla eg ay u qeybsadaan shanta dal oo ay Ciiddankooda ka tirsan yihiin Hawlgalka AMISOM, sidii dhacday Wejigii 1-aad ee 1,040 Askari looga soo saaray Somalia bishii December ee sannadkii 2017-kii.
Sidoo kale, Dowladda Burundi ayaa u muuqata inay weli ku dhegan tahay go’aanka ay kaga soo horjeedo in 1,000 ka tirsan Askartooda laga soo saaro Somalia oo ay ka joogaan 5,432 Askari.
Bishii December ee sannadkii horem Afhayeenka Ciiddanka Burundi, Biyereke Foloribert waxa uu tilmaamay in Go’aanka Ciiddanka Burundi lagu daad-gureynayo aysan weli ansixinin Guddiga Wada-xiriirinta Hawlgalladda AMISOM ee Somalia.
Si kastaba ha ahaatee, Ciiddanka Burundi ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM waxaa la sheegay inay yihiin isha uu dalkooda ka helo lacagta Adag, iyadoo dhinaca kale, Dowladda Burundi afartii bilood mar ay ka hesho Ururka Midowga Afrika lacag dhan 18 million oo Dollar .